1. Collect point card and get rewards - Eatfinity
1. ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီးဗေဒင်
2. ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
3. ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ ပျိုရွယ်သူတို့အတွက် ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာဗေဒင်
1. EXO ရဲ့အချပ်ရေသန်းချီရောင်းချရတဲ့ စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့ ‘The War’
2. Suzy ၏ တစ်ကိုယ်တော်အခွေသည် music charts ကိုရှင်းလင်းပြီး Seohyun ဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်
3. SBS ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် အဆိုတော်-သရုပ်ဆောင် Suzy
1. ပိတောက်ပင်ကို အိပ်မက်မက်တဲ့ ကောင်လေး - Chapter 1
2. တွင်းနက်များ၏ လိင်သဘာဝ - အစ/အဆုံး
3. ပြန်လည်ခံစားဂန္တဝင်ဝတ္ထုများ - Chapter 1
BTS ရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်အတွက် ကြိုတင်မှာယူမှုဟာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 1 သန်းနဲ့သရဖူဆောင်း နေကြောင်း အေဂျင်စီထုတ်ပြန်
SEOUL၊ စက်တင်ဘာလ (4) ရက် (Yonhap) –K-pop အဖွဲ့ BTS ရဲ့ ဒီလအတွင်းထွက်ရှိလာတော့မယ့် EP အယ်လ်ဘမ်သစ်အတွက် ကြိုတင်မှာယူမှုအရေအတွက်ဟာ ကော်ပီအချပ်ရေ 1 သန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီက စက်တင်ဘာလ (4) ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
"Love Yourself: Her" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ BTS ရဲ့ထွက်ရှိလာတော့မယ့် EP အယ်လ်ဘမ်အတွက်ဖြန့်ချိသူ ဖြစ်တဲ့ Loen Entertainment ဟာ သြဂုတ်လ (31) ရက်နေ့အထိ အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်အတွက် ကော်ပီအချပ်ရေ 1.05 သန်းမှာယူမှုကို လက်ခံရရှိထားကြောင်း Big Hit Entertainment ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကြိုတင်မှာယူမှုအရေအတွက်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ "Wings: You Never Walk Alone" အယ်လ်ဘမ်အတွက် ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 700,000 မှာယူမှုနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော်လေးမြင့်မားနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာယူမှုတွေဆီရောင်းချလိုက်တဲ့အခါ အဆိုပါမှာယူမှုအရေအတွက် ပိုပြီးမြင့်မားလာဖို့လည်း မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သြဂုတ်လ (30) ရက်နေ့မှာ အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်အတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုအရေအတွက် ဟာ Amazon ရဲ့ "CDs & Vinyl" အမျိုးအစားမှာ နံပါတ် 1 နေရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်အသစ်ဟာ (2018) ခုနှစ်အထိ စီးရီးလိုက် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာဖြစ်တဲ့ “Love Yourself” စီးရီးအသစ်ရဲ့ ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (18) ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
K-pop အမျိုးသားအဖွဲ့ BTS ပုံ (Yonhap)